နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: July 2009
Photo Credit to Expansys
Dedicated to WaTote ...
Android OS got not much 3rd party software to play around.
Despite the above fact, Sony Ericsson , one of the leading Phonetertainment owner did something unusual after surprisingly announced world first 12 MP phone, yesterday the phone giant again thrill its rivals with another phone so called, Rachel or Xperia X3.
I personally do not like Android, but after seeing the SE UI tweak with Android on Rachel, I'm now able to forget iPhone already.
One of the most fact that taunted me was the big display which is 3.8" and DVD Quality VDO recording. The Improvied UI isamust see one. Dream, I bet you will love this than yr hero HTC. :D
But, it wasn't clear about the spec: in detail such as the storage memory and video call capability.
Must wait and see products.
Expansys, one of the online mobile selling company was announcing this phone and now it can be pre-ordered Here already.
Price and released date are yet to be confirmed, and I hate about this.
You can read some fact about Rachel here and some of the leaked fotos, info here.
To watch the video pls click this link.
Credit to : GSMArena
Display: - 800 x 400 pixels/4" - Touch Sensitive Network: - 2G 850/900/1800/1900 (Quad-Band) - 3G: 900/2100 (Dual-Band) - HSDPA (10Mbps) - HSUPA (2Mbps) Camera: - 8 mega-pixels (auto-focus) - 8 x Digital Zoom - LED Flash - Image Stabilization - Smile Shutter - Face Detection Video: - VGA Video Recording Music: - Supported formats: MP3, AAC, eAAC+ Ringtones: - Monophonic - Polyphonic (64) - MP3 - AAC Messaging: - SMS - MMS (with video) - E-mail (POP3, SMTP, IMAP4, MS Exchange) Memory: - Phone Book - Dialled Calls - Missed Calls - Received Calls - microSDHC (external) Call Features: - Hands Free - Caller ID - Voice Dialling Connectivity: - miniUSB - 3.5mm AV connector - Bluetooth (2.1) - Wi-Fi (IEEE 802.11g) Navigation: - AGPS
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:48 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Rachel, Sony Ericsson
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:44 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီနေ့ နေကြတ်တယ်ဆိုတာကို သတင်းတွေထဲကနေ ကြားနေရတယ်။ ဒီတော့ ရုံးလာတဲ့အချိန်နဲ့ နေကြတ်ချိန်က ကိုက်နေတော့ အလာလမ်းမှာ ဖုန်းထဲက GPS ကိုဖွင့်ပြီး နေကြတ်နေချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးကို တင်ပေးလိုက်တယ်။ အပေါ်က ပုံက စက်ဝိုင်းလေးထဲမှာ E ဆိုတဲ့ နေရာနဲ့ ကပ်ရပ် လကလေး တွေ့မိလား။ အဲဒီမှာ နေနဲ့ လနဲ့ ထပ်နေတာကို ပြထားတာ တွေရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂျီပီအက်စ်က နေမင်းကြီး လမင်းကြီး ရှိရာနေရာကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ပါပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးက လတ္တီကျူ့၊ လောင်ကျီကျူ့ ကိန်းတွေက မိမိ လက်ရှိ ရောက်ရှိရာနေရာကို ဖေါ်ပြတာပါ။ ပုံကြီးကို အောက်မှာ ထပ်ကြည့်လှည့်ပါ။ အရပ်မျက်နှာကတော့ ကားပေါ်မှာ နေရင်းနဲ့ ဂျီပီအက်စ် ဖမ်းနေတာ ဆိုတော့ အရပ်မျက်နှာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပုံကြီးတွေမှာ E ဆိုတဲ့ အရှေ့အရပ်က အောက်ဘက်ကို ရောက်နေတာ တွေ့ရမယ်။
နေကြတ်တာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ စကားစမြည်ထိုင်ပြောနေကြတာပါ။ အဆက်မပြတ် တင်ပေးပါမယ်။ နေကြတ်ရာကနေ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ကျမှ ဓါတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ဖို့ သတိရသွားတယ်။
(http://www.solar-eclipse-live.info/watch-now/ အဲဒီလင့်ခ်ကနေ အင်တာနက်ကနေ အွန်လိုင်းကြည့်နေကြတာပါ။)
22 Jul 09, 10:48
Boyz: ကဲ.. အလုပ်လေးတွေ ဆက်လုပ်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။
သစ်ဆုံ: နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်လေးရပ်
Boyz: အေးဗျာ.. ခုထိ မမြင်လိုက်ရဘူး။
22 Jul 09, 10:47
May Flower: သောတရှင်အပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေရှင် (တီးလုံးသံ)
kom: သူရက်စက်သွားတယ်။ ဟင်း.............
May Flower: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာဟုလက်မှ သူရိန်နေမင်း အောင်မြင်စွာလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှုင်
maylay: ဒီမှာ msမှာ နေက လင်းနေပြီ ကိုကြီးရေ watchကို မကြည့်တော့ဘူး လုပ်လုပ်သွားပြီ။
22 Jul 09, 10:46
သစ်ဆုံ: ဟုတ်ပါ့ ဘဏ်လေးရယ်
May Flower: ရာဟုလက်က လွတ်ခါနီးမှ လိုင်းပြတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျား ကြည့်ရသူများ ဆန့် တငင်ငင်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်ခင်ဗျား
22 Jul 09, 10:45
maylay: သွားလိုက်ပြီ ပြန်မလာတော့ဘူး။ ခေါ်လို့ရတော့ဘူး
22 Jul 09, 10:44
Boyz: ပြန်ကို မလာတော့ပါလားကွယ်။
kom: attempting to reconect
22 Jul 09, 10:43
May Flower: မမရေ အပြင်ထွက်ရင် ရာဟုလက်က သူရိန်နေမင်းလွတ်ကာမှ ထွက်ပါလေ မတော် အမှောင်ဖုံးနေသော လောကမှာ လူမိုက်များနှင့်တွေ့ မည်စိုးရိမ်သောကြာင့်ပါ
maylay: ရဘူး buffering ဖြစ်နေတယ်
22 Jul 09, 10:42
သစ်ဆုံ: အတူတူပဲ မမနဲ့
May Flower: ဂိုးကာနီး ဂိုးကာနီး (သည်းခံပါရှင်) ရာဟုခံတွင်းကနေ လွတ်ကာနီး လွတ်ကာနီးနေပါပြီ တည်းတည်းလေးပဲလိုပါတော့တယ် (လိုင်းကောင်းပါတယ်)
Boyz: အင်း.. ပြတ်လိုက် ပြန်လာလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။
kom: ရဘူး buffering ဖြစ်နေတယ်
22 Jul 09, 10:41
Boyz: အဲ..အခုမှ တို့ဆီက ပြတ်သွားတယ်
maylay: ပြတ်သွားတယ် ဒီမှာလည်းပဲ မိုးက အပြင်မှာ အုံ့တုန်းပဲ နေကို မမြင်ရသေးဘူး
22 Jul 09, 10:40
Boyz: မပြတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကောင်းနေဆဲပါ
May Flower: လောကအလှ (ကိုဘကိုဗျူးသောဆိုဒ်မဟုတ်) ကို သူရိန်နေမင်းကြီးက မကြာမီအချိန်ပိစိညှောက်တောက်လေးမှာပဲ တာဝန်ကျေပွန်စွာ အလှဆင်ပါတော့မယ် စောင့်မျှော်ကြည့်ကြပါလေ
သစ်ဆုံ: ဟုတ်တယ် လိုင်းပြတ်သွားပြီ
kom: လိုင်းပြတ်သွားတယ။် ..........ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ်
22 Jul 09, 10:39
maylay: မောနင်းင် ကိုကြီးနဲ့ မမတို့၊ကိုကိုတို့ နေကြတ်တာကြည့်ပြီးရင် လုပ်လုပ် လုပ်တော့နော် ။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့တခါ။ ခုတခါ ကိုကြီးရေ ကျေးဇူး လင့်ခ်ဖွင့်ပြီး ကြည့်ရလို့ ။
May Flower: သူရိန်နေမင်းကြီးဟာ သူရဲ့ မူလအခြေအနေကို မကြာမီမှာပဲ ပြန်လည်ရရှိတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြပါစို့ လားရှင်
22 Jul 09, 10:38
သစ်ဆုံ: ဘာမှတွေ့တော့ဘူး ပျောက်သွားပြန်ပြီ
Boyz: နေအပြည့် လွတ်သွားတာကို ကြည့်ပြီးမှ သွားပါလေ ကေအိုအမ်
Boyz: တည်းတည်းလေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ နေမင်းကြီး ရာဟု ခံတွင်းက လွတ်မြောက်ပါတော့မယ်။
22 Jul 09, 10:37
kom: ရေသွားချိုးလိုက်ဦးမယ်။ အပြင်သွားမလို့။ တို့ကို သတိရပါ။
Boyz: နားမလည်ရင် ညမှ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ ခု ရုံးမှာဆိုတော့ သေချာ ရှင်းပြလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
May Flower: ဟော ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း အဓိပါယ်ပေါ်လွင် (သည်းခံပါရှင်) သူရိန်နေမင်းကြီးဟာ အမှောင်ဖုန်းရာမှ လွှတ်မြောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ပြောကြားအပ်ပါသည် ရှင်
kom: နားလည်ရဲ့လားမေ။ နားမလည်ရင် ထပ်ရှင်းခိုင်း။
22 Jul 09, 10:36
Boyz: ကြည့်ချင်တာ ဘာညာ လုပ်လို့ရတယ်။ အကောင့်ဆောက်ပြီးရင် ပြောတာ
Boyz: စတားဟဘ်ဆို အိုင်စီနံပါတ် လိုလိမ့်မယ်။ စတားဟဘ်ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ My account manager ဆိုတာကနေ အကောင့်တစ်ခု ဆောက်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ အိုင်စီနံပါတ် ဘာညာ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ လိပ်စာပြောင်း၊ ဘီလ်ပြောင်း၊ ဘီလ်အဟောင်
22 Jul 09, 10:31
သစ်ဆုံ: ဘုရားရေ ကိုဘ ဆားချက်တာဟုတ်ဘူး ငံပြာရည်များချက်နေသလားကွယ်
22 Jul 09, 10:25
May Flower: ကောင်ကောင်မို စောစောစီးစီး လျှောက်ပြောနေတယ် (ကိုဘ Starhub ပါ)
22 Jul 09, 10:24
May Flower: တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူရိန်နေမင်းကြီးဟာ အမှောင်ဖုံးထားရာကနေ တိုးထွက်လာနေပါပြီ သူ့ ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝအလှနဲ့ကမ္ဘာမြေကို အလင်းဓါတ် အနွေးဓါတ်တွေနဲ့သူ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ
Boyz: တင်ထားတယ် ဘလော့မှာ။
kom: ဝင်ယောင်ပေးတာပါ။ ဒီလိုဘဲပေါ့. လောကထည်းနေရင် ကိုယ့်ကို သူမြှောက် သူ့ကို ကိုယ်မြှောက်။
22 Jul 09, 10:23
kom: blog မှာ ပုံထည့်ချင်ရင်ထည့်ဘို့။ မထည့်လဲ သဘောပါ။ စောစောက မေ့သွားတယ်။ အခုမှ သတိရတယ်။
22 Jul 09, 10:22
22 Jul 09, 10:19
Boyz: တစ်ကမ္ဘာလုံး ပြုံဆွဲတော့ ဆာဗာက မခံနိုင်တော့ဘူး Brute Attck သဘောလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ DDoS လို ဖြစ်သွားတာလဲ ပါပါတယ်။
Boyz: ဟုတ်ဘူး။ ဆာဗာဒေါင်းတာက ဟိုလွင့်တဲ့ ဘက်က ဆာဗာ ဒေါင်းတာပါ။
22 Jul 09, 10:18
ဆု: တရုံးလုံး ကြည့်နေကြတယ် ထင်တယ်..ရုံးက Serverခဏခဏ ဒေါင်းနေပြီ... Internal Error တဲ့
Boyz: Starhub or Singtel ဘဏ်လေး။
သစ်ဆုံ: ကေကေမောင်လာပြီ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် ဘိုင်ပါ
22 Jul 09, 10:16
May Flower: နေကြတ်တာလည်း ကြည့်နေတယ် ပါစင်နယ်လည်း မေးချင်တယ် အားရင်ဖြေပေးပါဆရာ
22 Jul 09, 10:15
May Flower: ကိုဘ စကားမစပ် မေးစရာရှိလို့ဖုန်းဘီလ်ပို့ ဖို့လိပ်စာပြောင်းတာ စလုံး IC လိုလား (ခုဖုန်းက သူငယ်ချင်းနာမည်နဲ့ ဝယ်ထားတာ) အရင်တခေါက်ပြောင်းတုန်းက သူများပြောင်းပေးတာ မလိုဘူးထင်တာပဲ (အဲ့ဒါလေး သိရင် ပြောပါ
22 Jul 09, 10:11
Boyz: မျောက်လက်ကျနေတာပဲ အငြိမ်ကို မနေနိုင်ပါလား ကင်မရာမင်းရယ်။...
22 Jul 09, 10:10
Boyz: သူတို့ အလင်းအားကို ချဲ့လိုက်တာနေမှာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်ကို
Boyz: ဟုတ်ပါ့... လင်းနေတာပဲ။
Boyz: တို့က ရုံးမှာဆိုတော့ အသံဖွင့်ထားလို့ မဖြစ်ဘူးကွယ်။ ခုနက ဘာသံတွေကြားလဲဆိုတာ ပြောပြပါ ကေအိုအမ်။
kom: ဒီတစ် ခါ အတော်ကြီးလာတယ။်
Boyz: မှုန်မှုန်လေး ပြန်ပေါ်လာပြီ။
22 Jul 09, 10:08
kom: ဟင်. ဘာမှ လဲ မကြားရတော့ဘူး။
22 Jul 09, 10:07
Boyz: ပြန်မြင်ရပါပြီ။ နေလုံးကြီး ဇောက်ထိုးဖြစ်နေသည်။ မှောက်ခုံကြီးမှ အကြီးကြီး ဖြစ်နေပါသည်။
သစ်ဆုံ: မိုက်တယ် အခုပေါ်တာကြည့်လိူက်
Boyz: ခေါ်သံတွေ ကြားလား... ကြားလား.. ကြားလား.. ကြားရဲ့လား....။ (အယ်နောင်း၏ သီချင်းဖြစ်သည်။ မြိုးသိမည် မဟုတ်။ ဆင်ဆင်သာ သိမည်)
kom: ဟဲလို...............လို....................................ို.ုို
Boyz: ကြားလား... ကြားလား...။
22 Jul 09, 10:04
kom: ဟဲ လို ဟဲလု..ိ................
22 Jul 09, 10:03
Boyz: မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ လိုင်းက ရီကော်နက်ရှင်းဆိုပြီး ဆက်သွယ်မှု ရဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ
22 Jul 09, 10:02
Boyz: အဲ.. လိုင်းပြန်ကောင်းသွားပါပြီ. buffering လုပ်နေပါတယ်။ များမကြာမှီ လိုက်ဖ်နေကြတ်တာကို ချက်တင်လုပ်ပေးပါတော့မယ်။
Boyz: ပါစင်နယ်များ မေးမြန်းခြင်း သည်းခံပါ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်။ ဒီလိုပေါ့နော်။ ဟိုလိုပေါ့နော်။ ... ပေါ့နော်။ .. ပေါ့နော်....။ (လိုင်းပြတ်သွား...။)
Boyz: http://www.solar-eclipse-live.info/watch-now/ ဘဏ်လေး နေကြတ်နေတယ်။ ဒီလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်လိုက်။
22 Jul 09, 09:59
May Flower: ကိုဘ မမ မျိုး မေ ပေါက် သစ်သစ် ဆင်ဆင် ညီ ရောသမကေ kkmg နှင့် အားလုံး မင်လာနေ့ကောင်းသောနေ့မိုးရွာသောနေ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ
22 Jul 09, 09:58
kom: လက် နဲ့စိတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်မဖြစ်သိချင်ပါတယ်။ အမှန်ကိုဖြေပါ။
22 Jul 09, 09:56
Boyz: (အဲလိုပဲ အတည်အတန့်တွေ ရေးလို့ မရတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လက်က ချော်ချော်သွားတယ်)
သစ်ဆုံ: အတူတူပဲ ဒီမှာလည်း အဖြူကြီးဖြစ်လို့
Boyz: အော်.. ငါ့မော်နီတာ စကရင်မှာတော့ ဖြူလို့။ ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။ လိုင်းပြုတ်သွားပြီ ထင်ပါ့။
22 Jul 09, 09:55
Boyz: ကမ္ဘာဦးက လူသားတွေ အမှောင်တွင်းမှာ နေရာကနေ ပထမဦးဆုံး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နေမင်းကြီးကို မြင်ရသလို လူတွေ အားလုံးဟာ နေမင်းကြီးကို အငမ်းမရ တောင့်တခြင်းများစွာ၊ ငတ်မွတ်ခြင်းများစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြတယ်။
Boyz: ကောင်းကင်တစ်ခို ပြိုမလို ဖြစ်နေတာ အခုတော့ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။
Boyz: ပြိုမလို ဖြစ်နေတဲ့ တိမ်ညိုပုပ်တွေ လေနတ်သားရဲ့ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အဝေးကို လွင့်ပါးသွားပြီ။
Boyz: အေးစိမ့်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခွင်ဟာ နေမင်းကြီးဆီက တစ်ပိုင်းတစ်စ ပြန်လည်ရလာတဲ့ အနွေးဓါတ်နဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ဖြစ်လာပြီ။
22 Jul 09, 09:52
Boyz: သြကာသလောကကြီး ရာဟုဂြိုဟ်ဖမ်းစားခြင်းခံရတာကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နေမင်းကြီးကို သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုနေကြတယ်။
22 Jul 09, 09:51
kom: ရွေဥဒေါင်း ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲသလိုဘဲလေ. ဟို................ခေတ်ကိုရောက်သွားတဲဇတ်လမ်း
Boyz: နေက အတော်ကို လင်းလင်းခြင်းခြင်း ဖြစ်လာပြီ။ ငှက်လေးတွေ စိုးစီစိုးစီ ပြန်အော်လာပြီ။ ခုနက အလန့်တကြား ထအာနေတဲ့ ကျီးကန်းတွေ ငြိမ်သွားပြီ။ စာကလေးတွေ ပကျိပကျိနဲ့ အသိုက်ကနေ ပြူတစ်ပြူတစ် လုပ်နေတယ်။
22 Jul 09, 09:50
Boyz: Hero ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပဲ။ Hiro Nakamura တစ်ယောက် ဒီလို အချိန်ဆို ဆာမူရိုင်းခေတ်ထဲ ပြန်ရောက်နေလောက်ပြီ။ သူက အတိတ်အနာဂတ်ကို သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့သူလေ။
22 Jul 09, 09:44
myo: အော် နေကြတ်တယ် ဆိုတာ ကျောက်သင်ပုန်းလို ဘလက်ဘုဒ်လို မည်းမည်းကြီးကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
22 Jul 09, 09:41
Boyz: ဝယ်ပေးမယ် အန်တီကို။ ပွက်ဆိတ်သွေးနဲ့ မျော့ရိုးစွပ်ပြုတ်တိုက်ရင် ဝယ်ပေးမယ်။
သစ်ဆုံ: ရပြီ ပြန်ပေါ်လာပြီ ဘယ်နိုင်ငံကရိုက်ပြီး လွှင့်နေတာလဲဟင်
Boyz: ဟား.. ပြုတ်သွားပြီ။ Internal Server Error တဲ့။ ကြည့်တဲ့သူ ဆွဲတာများလို့ ဆာဗာတောင် ဒေါင်းသွားတယ်။ ဟားဟားဟား
kom: အဲဒီလက်စွပ်ကလေး လိုချင်တယ်။ ဝယ်ပေးပါ။
Boyz: Refresh ပြန်လုပ်လိုက်။ ပြန်မြင်ရပြီ။ နေရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်ကနေ လက်စွပ်ပေါ်က စိန်လေး မြင်ရသလို မြင်နေတယ်။
kom: မျိုးဘယ်က မ လာတာလဲ။
22 Jul 09, 09:39
kom: တို့လဲ မမြင်ရတော့ဘူး.
22 Jul 09, 09:37
Boyz: လိုင်းကျသွားပြန်ပြီထင်တယ်။ တို့လဲ မမြင်ရတော့ဘူး
22 Jul 09, 09:36
22 Jul 09, 09:35
Boyz: နေလုံးအပေါ်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်ပေါ်လာပါပြီ။
သစ်ဆုံ: အင်း ထင်ပါတယ် မြင်လိုက်လို့လန့်ပြီးရိုက်တော့ဘူးလေ
kom: တို့ကိုတောင် ခွင့်တောင်းပြိး ဓါတ်ပုံရိုက်သွားသေးတယ်
Boyz: ထပ်ရိုက်ပြန်ပြီ။ မျက်စိကျိန်းပါတယ်ဆို။ ကြည့်ရတာ သူ မောင်ဘွိုင်းကို ကင်မရာထဲကတစ်ဆင့် မြင်လိုက်လို့လား မသိဘူး။
Boyz: ကောင်လေးက ကင်မရာကြီးရှေ့တည့်တည့် ဒါ့ပုံလာရိုက်တာ မီးတောင် ဖျက်ကနဲ လင်းသွားလို့ လန့်တောင် လန့်သွားတယ်.
သစ်ဆုံ: ကောင်လေးကချောလားမသိဘူး မှောင်နေတော့မြင်ရဘူး
kom: တို့လဲ မြင်တယ် မျိုးလေးရယ်
သစ်ဆုံ: နေ့ဘက်ကြီး မှောင်သွားတယ်နော်
Boyz: ကောင်မလေးက ချောတယ်နော် အန်တီ
Boyz: မြင်တယ် မြိုး။ တို့ဆီမှာ ဆက်တိုက်မြင်နေတယ်
kom: ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတောင် မြင်လိုက်ရသေး.ကောင်မလေးက စကပ်တိုတိုလေးနဲ့ မိုက်တယ်
kom: အို..မြင်တယ် မြင်တယ်
myo: Service Temporarily Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
22 Jul 09, 09:25
Boyz: http://www.solar-eclipse-live.info/watch-now/ ဒီမှာ နေကြတ်တာ ပြနေတယ်
kom: မြင်တယ်. မြင်တယ်။ very excitedly
kom: woo. လူတွေထွက်လာပါလား။ နေကြတတ်တာမှာ. က
Boyz: နေလုံးဝကြတ်သွားပြီ။ အခုလမ်းပေါ်မှာ ညလိုပဲ လမ်းမီးတွေ လင်းနေတယ်။ လူတွေ လူတွေ လမ်းလျှောက်နေတယ်။ အများကြီးပဲ။ ညဈေးလိုပဲ။
22 Jul 09, 09:24
သစ်ဆုံ: နေကြတ်တာဘယ်မှာကြည့်ရမှာတုန်း ဒီမှာကတော့ မိုးတွေမိလာတယ်
Boyz: အင်း... သူ့ကို ကျိန်ဆဲလိုက်လို့လား မသိဘူး။ အမည်းပဲ ပေါ်တော့တယ်။
22 Jul 09, 09:18
Boyz: ကတောက်... ကင်မရာမန်းက သူ့ကင်မရာနဲ့ မကြည့်ပဲ ကိုယ်ပိုင်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်နေတာလား မသိဘူး။ ကင်မရာ အဲန်ဂယ်ကို လာရွှေ့ပေးဖို့ သတိမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ဘကြီးနေမင်းက တစ်နေရာတည်းနေတာကျနေတာပဲ
22 Jul 09, 09:17
Boyz: ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆို ဒီအကွက်က ရင်သိမ့်တုန်ပဲ
Boyz: မကောင်းမှုကျူးလွန်ဖို့ တာစူနေပြီပေါ့ဗျာ။
Boyz: လက အပေါ်ကနေ အောက်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆင်းလာပြီး နေကို ကွယ်တာလေ။ အခု နေအောက်ပိုင်းက လခြမ်းကွေးလိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ၈ပုံတစ်ပုံပဲ လင်းတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာဂြိုဟ်ကောင်များက
myo: အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ နေက မကြတ်နိုင်သးဘူးလား
Boyz: နေက ဘယ့်နှယ်ဇောက်ထိုး ဖြစ်မှာလဲဗျာ။ အလုံးကြီးကို အတည့်ရယ် ဇောက်ထိုးရယ်လို့ ခွဲနိုင်သေးတာလား
22 Jul 09, 09:15
myo: ကျောက်သင်ပုန်းထိုင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲ.. ဟေ့ တို့မထုံဘူး မိုးအေးအေးနဲ့ ကွေးတာ ပဲကောင်းတယ် နေဇောက်ထိုးဘယ်လိုဖြစ်လဲ သိချင်လိုက်တာ
22 Jul 09, 09:13
kom: ဟော. နေက ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားပြီ။
22 Jul 09, 09:12
Boyz: ကင်မရာသမား လက်မငြိမ်ဘူးထင်တယ်။ နေက ဘယ်အပေါ်ထောင့်ကို ကပ်သွားတယ်။
kom: မြင်လိုက်ရသေးတယ။် အပေါ်ရောက်နေလို့ ကာဆာနဲ့တောင် အောက် ကို ဆွဲချမိသေးတယ်။ အလယ်ရောက်လာအောင်လို့ဆိုပြီ။ အခုတော့မဲမဲကြီးဘဲမြင်ရတော့တယ်။ ဟော ပြနထွက်လာပြီ။ပေါါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့.ရယ်။
22 Jul 09, 09:11
Boyz: F5 ပြန်နှိပ်လိုက် မြိုး။
22 Jul 09, 09:10
myo: မည်းမည်း အကွက်ကြီးက ဘာမှလည်း ပေါ်မလာဘူး ထိုင်စောင့်ကြည့်နေတာ ကော်နက်ရှင်ကလည်း အကောင်းကြီးကို
22 Jul 09, 09:09
Boyz: မြိုးခမျာ အသည်းအသန် ခဲမှန်ရှာပြီး ကျားကုတ်ကျားခဲ ကော်နက်ရှင်မိအောင် လပ်ပတုတ်ကို ပြတင်းပေါက်နား ရွှေ့ဖို့ ကြိုးစားနေလား မသိဘူး။
Boyz: ဘယ်နိုင်ငံကဟာကို လွင့်နေတာလဲ မသိဘူး။ အခုမှ အပြည့်စကြတ်တော့မယ်။ မြန်မာပြည်တော့ ကြတ်ပြီးသွားရော့...။ ကြည့်ရတာ ဂျပန်နားနီးတစ်ဝိုက်က ဖြစ်လိမ့်မယ်။
22 Jul 09, 09:08
kom: အသံလည်း မထွက်ဘူး..................
22 Jul 09, 09:07
kom: မျိုးလေ.း သနားပါတယ။်
kom: ဟယယ် အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့လောက ကြီးကို ကိုယ်လေ.............
22 Jul 09, 09:06
Boyz: ကိုယ့်ဘက်က တာစည်းရိုးကို လုံအောင် ကာပြီးမှ မိမိရန်သူကို တိုက်ခိုက်ပါတဲ့။
kom: မျို.ူ ..ဟိဟိ
kom: ဟင်. ပြောပြီးကာမှ ရသွားတယ်။ဆောရီး။
kom: မရဘူး. ကြည့်လို့မရဘူး.........
Boyz: အခုလိုက်ဖ်ကြည့်နေတယ်။ ကော်နက်ရှင်စုတ်နေရင်တော့ ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
22 Jul 09, 09:02
myo: ကြည့်လို့မရဘူး လင့်က
myo: နေကြတ်တာကလည်း မိုးတွေ သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာတာလား ဘာပဲပြောပြောကွေးလို့ကောင်းတယ်
Boyz: နေကြတ်တာကို အွန်လိုင်းကနေ live ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ http://www.solar-eclipse-live.info/watch-now/
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:29 AM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: eclipse, Live, solar
ဆို - မေလှမြိုင်
စီဘောက်ထဲက ကိုJack လာပေးသွားတဲ့ အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ သီချင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အလေးပြုပါတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဒေါ်မေလှမြိုင်က သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:47 AM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:28 PM 18 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Starhub : Internet on Mobile အကြောင်း သိကောင်းစရာ။
တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာများကြောင့် အခုအခါ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ အင်တာနက်တွေ သုံးစွဲလို့ရနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်လဲ သူများ သုံးတာ မြင်တော့ သုံးချင်တာမို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး ကိုယ် Voice Plan ယူထားတဲ့ Telco ဖြစ်တဲ့ Starhub ဆီမှာ အင်တာနက်ပလန်လေးများ ရှိကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီး စုံစမ်းထားတာလေးတွေ ဝေမျှချင်တာပါ။ (၂၀၀၉၊ ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့အထိ Update ပါ။)
Star Hub Mobile Internet plan ကို Max Mobile ဆိုပြီး ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိပါတယ်။
၁။ ပထမ တစ်ခုက မိုဘိုင်းပေါ်မှာ သုံးရတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပလန် သုံးမျိုး ခွဲထားပါတယ်။
၁.က - Max Mobile Lite
သူကတော့ လစဉ်ကြေး မပါပဲ ကြိုက်သလောက်သုံး၊ ကျသလောက်ပေးတဲ့ စံနစ်ပါ။ Excess Charges 1.07 cents/KB နှုန်းနဲ့ ဆောင်ရပါမယ်။ အများဆုံး $၉၄.၁၆ ပေးရပါတယ်။ One Time Registration Fees $၁၀.၇၀ (incld GST) ပေးရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ မှတ်ပုံတင်ခကို ဖရီးပေးထားပါတယ်။
၁.ခ- MaxMobile Value
သူကတော့ လစဉ်ကြေး ၁၀.၇၀ ကျပ်ပါ။ လောလောဆယ် လစဉ်ကြေးကို ၅၀% လျှော့ပေးထားပါတယ်။ ၅.၃၅ ကျပ်ပဲ ပေးဆောင်ရပါမယ်။ ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာအထိ ပရိုမိုးရှင်းပါ။ ဒေတာကို ၁၀ မက်ဂါဘိုဒ် လစဉ် ဖရီး ပေးထားပြီး ဒေတာသုံးစွဲမှု ပမာဏ ကျော်လွန်သွားရင်တော့ Excess Charges 0.32 cents/KB နှုန်းနဲ့ ဆောင်ရပါမယ်။ အများဆုံး $၃၆.၃၇ ပေးရပါတယ်။(လစဉ်ကြေး အပါအ၀င်+ဒေတာ ပိုမိုသုံးစွဲခ) ။ One Time Registration Fees $၁၀.၇၀ (incld GST) ပေးရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ မှတ်ပုံတင်ခကို ဖရီးပေးထားပါတယ်။
၁.ဂ- MaxMobile Premium
သူကတော့ လစဉ်ကြေး ၁၉.၉၀ ကျပ်ပါ။ ဒေတာကို ၁ ဂစ်ဂါဘိုဒ် လစဉ် ဖရီး ပေးထားပြီး ဒေတာသုံးစွဲမှု ပမာဏ ကျော်လွန်သွားရင်တော့ Excess Charges 0.32 cents/KB နှုန်းနဲ့ ဆောင်ရပါမယ်။ အများဆုံး $၃၆.၃၇ ပေးရပါတယ်။(လစဉ်ကြေး အပါအ၀င်+ဒေတာ ပိုမိုသုံးစွဲခ) ။ One Time Registration Fees $၁၀.၇၀ (incld GST) ပေးရပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ မှတ်ပုံတင်ခကို ဖရီးပေးထားပါတယ်။
၂။ နောက်တစ်ခုက ပီစီ၊ လပ်ပ်တော့ပ်များနဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ အင်တာနက် သုံးဖို့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါ။ Mobile Broadband လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ သူက USB Modem Device ထဲမှာ 3G SIM Card ထည့်သုံးရတာမျိုးပါ။ ဗွိုက်ပလန် မယူပဲ ဒေတာ ပလန်သာ ယူချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ Device အတွက် သတ်သတ် ၀ယ်ယူရပါတယ်။ သူလဲ သုံးမျိုး ခွဲထားပါတယ်။
၂.က- Max Mobile SurfLite
သူကတော့ 2Mbps download speed mobile broadband plan အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လစဉ်ကြေးကတော့h $38.72 w/GST per month ဖြစ်ပါတယ်။ One Time Registrations Fees $၁၀.၇၀ (incld. GST) ပေးရပါမယ်။ ဆင်းကဒ်အတွက် ၄၇ ကျပ်လောက် ပေးရပါမယ်။ USB Modem Device ကို ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးတတ်ပါတယ်။
၂.ခ- MaxMobile Ultimate
သူကတော့ 7.2Mbps download speed mobile broadband plan အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လစဉ်ကြေးကတော့h $72.76 w/GST per month ဖြစ်ပါတယ်။ One Time Registrations Fees $၁၀.၇၀ (incld. GST) ပေးရပါမယ်။ ဆင်းကဒ်အတွက် ၄၇ ကျပ်လောက် ပေးရပါမယ်။ USB Modem Device ကို ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးတတ်ပါတယ်။
၂.ဂ- MaxMobile Prepaid :
ဒီအမျိုးအစားကတော့ ခဏတာ အလည်အပတ် ရောက်ရှိတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်များ အင်တာနက် ခဏတစ်ဖြုတ် သုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ၁၈ ကျပ်တန် ထုတ်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။ သူလဲပဲ ယူအက်စ်ပီ ဒီဗိုက် ၀ယ်မှ ရမယ် ထင်တယ်။
တစ်လောက ဖုန်းမှာ အင်တာနက်သုံးချင်လို့ လိုက်ဖတ်ရာက သိထားတဲ့ အချက်တွေပါ။ အပ်ပ်ဒိတ် အချက်အလက်နဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ စတားဟဘ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် အရင်က စတားဟပ်ဘ် ဆိုဒ် လေးအောက်တွေက ဖတ်ရလွယ်တယ်။ အခု ဇူလိုင်လကနေ စပြီးပြောင်းသွားတဲ့ လေးအောက်က မျက်စိလည်စရာကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:14 PM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Data, Phone, Starhub
T-Wolf : man, my girlfriend left me for some faggot named robert (ငါ့ရည်းစားလေ ရောဘတ်ဆိုတဲ့ ကောင်နောက်ပါသွားတယ်။)
RdAwG20 : you don't live in Hope mills do you? (Hope Mills မှာ နေတာ မင်းလား။)
T-Wolf : ya, why man? (ဟုတ်တယ်လေ ဘာလို့လဲ.)
RdAwG20: lol, just wondering, was her namne alisson? (ဟီး.. သိချင်ရုံ သက်သက်ပါ။ အဲ့ကောင်မလေး နာမည်က Alisson လား)
T-Wolf : you mother f**ker (ေ-ာက်ခွေး..။)
ကောင်းကောင်း လက်စားချေလိုက်တယ်။ :P
death09းmy girlfriend broke up with me and sent me pix of her and her new boyfriend in bed
ktp753းouch.
death09းyeah.i sent them to her dad
တွေ့လား...။ သူတို့ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြဘူး။
Th3No0bးIm going to be the next hitler
Th3No0bးIm going to kill all the jews and 1 clown
RageAgainsttheAmishး why the clown
Th3No0bးSee? no one cares about the jews
RageAgainsttheAmishးlmao
lmao ဆိုတာ Laugh My A** Outရဲ့ အတိုကောက်ပါ။
Jeedo : hey baby, whats up?
Indidge : umm....nothing?
Jeedo : So....want me to like come over today so we can xxxx?
Indidge : Wait....did you want to speak to my daughter?
Jeedo : Yes Mrs.Miller.. :-/
အေး အဲဒါ နင်ပဲ။
Night-hen-gayle : I gotta go. There'sadude next to me and he's watching me type, which is sort of starting to creep me out. Yes dude next to me, I mean you.
Sonium : someone speak python here?
lucky : HHHHHSSSSSHSSS
lucky : SSSSS
Sonium : the programming language
Sui88 : 67% of girls are stupid
V-girl : i belong with the other 13%
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:00 AM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Chat, Joke, Quote
#330261 +(15348)- [X]
ရှင်းလင်းချက်။ ။ပထမ တစ်ယောက်ကို ဒုတိယလူကbပြောင်းပြန် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ လို့ မေးပြီးမှ ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ သူပြန်သတိရသွားလို့ wait never mind လို့ ပြန်ပြောလိုက်တာပါ။ ဘဘောပေါက်လား မသိဘူး။ အဲဒါ ဒီပို့စ်ရဲ့အသက်ပဲ။
#23601 +(14245)- [X]
ရှင်းလင်းချက်။ ။ mage က သူ့ညီမလေးကို Unzipping အတွက် ဘာပေးရမလဲ မေးတာကို Kevyn က ပိုက်ဆံ တစ်ဆယ်ပေးပြီး unzip လုပ်ခိုင်းတာပါ။ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ တွေးကြတာပေါ့လေ။ နောက်မှ mage သဘောပေါက်သွားပြီး သူ unzip လုပ်ချင်တာက ကွန်ပြူတာထဲက WinZip Software ကို Unzip လုပ်ခိုင်းတာပါ။
#835030 +(14089)- [X]
Khassaki> HI EVERYBODY!!!!!!!!!!
Judge-Mental> try pressing the the Caps Lock key
Khassaki> O THANKS!!! ITS SO MUCH EASIER TO WRITE NOW!!!!!!!
Judge-Mental> fcuk me
ရှင်းလင်းချက်။ ။ပထမ တစ်ယောက်ကို ဒုတိယလူက စာလုံးကြီးနဲ့ မရေးဖို့ Caps Lock key ကို Press လုပ်ပြီး ပိတ်ခိုင်းတာပါ။ သူထင်နေတာ ပထမတစ်ယောက်က အဲဒါကို On ထားတယ် ထင်လို့ပါ။ တစ်ကယ်တော့ ပထမ တစ်ယောက်က Shift key ကို နှိပ်ပြီး စာလုံးကြီးတွေ ရိုက်နေရတာပါ။ ဒုတိယ လူ အကြံပေးတော့ shift နှိပ်စရာ မလိုတော့လို့ ကျေးဇူးတင်တာမှာ ဒုတိယလူ ဘုရားတ ရတော့တာပဲ။ (ဘာသာပြန်လိုက်ရင် မကျွမ်းတော့ အရသာ ပေါ့သွားတယ်ဗျာ။)
#258908 +(13469)- [X]
Ben174 က သူ့ရုံးမှာ အိုတီ လုပ်တာ ၉၀%က သူချက်ဝင်တာ ဘာညာ ပေါ့လေ။ ရုံးက မသိဘူး ဆိုပြီး ရုံးကို သူတစ်ပတ်ရိုက်နိုင်တာကို ChrisLMBကို ပြောနေတာ။ ChrisLMBက ငါ့ဆီက ဝန်ထမ်းသာ အဲလိုလုပ်ရင် တစ်ခါတည်း ဖြုတ်မယ်လို့ ပြောတာပေါ့။ အဲဒီမှာ Ben174 က နင်ဘယ်မှာ လုပ်တာလဲလို့ မေးတော့ Chris က ငါက LowerMyBills.com က CTO လို့လဲ ဆိုရော Ben174 က လစ်ပြေးပါလေရော။ Ben174 ရဲ့ အီးမေးလ်နားက ဒိုမိန်းကို သတိထားဖတ်ကြည့်ပါ။ ဟားဟား။
အင်း။ နားမလည်တဲ့သူတွေ များတယ်ဆိုလို့ ရှင်းလင်းချက်ကို နောက်မှ ထပ်ဖြည့်လိုက်တာပါ။ ဒီမိုး၊ ဒီလေ၊ ဒီရေနဲ့ဆို ဒီလိုပို့စ်တွေ ဆက်တင်ချင်မှ တင်ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါ့။
အမိုက် နင့်ပြင် ရှိသေးလား။
မာန်လည်ဆရာတော် ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီကဗျာထဲ ပါတဲ့အတိုင်း လောကကြီးမှာ ရခဲလှတဲ့ အခွင့်အရေးကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်ခြင်း မပြုပဲ လက်လွှတ်လိုက်တဲ့ လူ့အန္ဓ၊ ဗာလနံ၊ လူမိုက်များစွာ ရှိသေး/ဆဲ/လတ္တံ့ ဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:40 AM 17 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အခုတစ်ခေါက်တော့ ပုံတွေပဲ တင်သွားပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ စာညွှန်းလေး ထည့်ပေးပါမယ်။
လိမ္မော်ရည်တွေ။ အသီးကနေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညစ်ပေးထားတာ။ ဘတ်၂၀တဲ့။
ဖရဲသီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်... ဂျွမ်းကနဲ ကိုက်စားလိုက်တယ်...။
အုန်းစိမ်းရည်တွေ တစ်လုံး ဘယ်လောက်ပါလိမ့်... မေ့သွားပြီ...။ ၁၀ ဘတ် ထင်တယ်။
အော်တိုပတ်စ်ကင်... “အားဟန်ထလေး” တွေ...။
၀က်အူချောင်းနဲ့ အီဆန် ထမင်းချဉ်တွေ...။ ဆိုက်ကလော် နဲ့ ဆိုက်အို...။
ငြုပ်သီးထောင်းမလား...။ ငြုပ်ဆုံ ကောင်းကောင်းတော့ လိုလိမ့်မယ်။ လာနော်.. ဆုံကောင်းကောင်းတွေ...။
ညရောက်တော့ လမ်းဘေးမှာ ၀မ်းဖြည့်ကြတယ်။ ငါးက တစ်တောင်လောက် ရှိတာ အရိုးပဲ ကျန်တော့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:59 AM 22 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:24 AM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မနက်ခင်း နိုးထစ အချိန်မှာ
ကောင်းကင်ဟာ ဆန့်ကျင်ဖက် အလှတွေ ပေါင်းစပ်ထားလို့ပေါ့။
မိုးသားတွေ အပေါ်ကို အလုအယက် လုတက်နေကြချိန်
နေမင်းကြီးက ထွန်းလင်းလို့ ကောင်းတုန်း။
ဒီအလှကို တစ်ဒင်္ဂ ငေးမိလို့
ဓါတ်လှေကား သုံးစင်းစာ လွှတ်သွားတယ်။
ဘတ်စ်ကား လေးစင်း ကျော်သွားတယ်။
လမ်းပေါ်မှာတော့ လူတွေ လူတွေ
ပြိုတော့မယ့် မို့ကို စိုးထိတ်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ မော့ကြည့်နေကြလေရဲ့...။
ငါ လာရာလမ်းမှာ လူတွေ တစ်သုတ်သုတ် လျှောက်လို့ပေါ့။
မိုးအောက်မှာနေလို့ မိုးစိုတာ မဆန်းဘူး။
အမိုးအကာ ပါရဲ့သားနဲ့ မိုးစိုတာ ဆန်းနေခဲ့တယ်။
ကောင်မလေး တစ်ယောက် ထီးဆောင်းပြီး မိုးရေတွေ စိုရွှဲနေတယ်။
ကိုယ်ခေါ်ထားတဲ့ ကားလေး ရောက်လာတယ်။
ကောင်မလေးက မိုးရေတွေ ရွှဲနေတုန်း။
ကိုယ်ကတော့ မိုးရေတွေ ရွှဲကျန်ခဲ့တယ်။
ကောင်းကင်ကတော့ အငြိုးနဲ့ မိုးတွေ သဲသဲ ရွာချတုန်း။
(လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ မနေ့က ပုံလေးပါ။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:41 PM 23 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Broswer လောကမှာ အခမဲ့ရပြီး သုံးစွဲရလွယ်ကူတဲ့ FireFox Browser ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် 3.5 Version ကို စတင် Download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ Install မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဆွဲချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေး အရင်လာပေးထားတာပါ။ နောက်မှ သုံးစွဲရတာ ဘယ်လို အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ လာပြောပြပါမယ်။
To Download FireFox 3.5 : Click here
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:29 AM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Browser, Firefox V3.5